ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: မြန်မာများအတွက်ပါမစ်ပေးမည့်အခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ် (အထူး)
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ပါမစ် ပေးမည့် အစီအစဉ် ဟုကြော်ငြာထားသော OSC အစီအစဉ် (သို့) G to G (အစိုးရ ၂ ဘက်သဘောတူမှု) အစီအစဉ်သည် ၂ ဘက်အစိုးရ ကြော်ငြာထားသည့်အတိုင်း ယနေ့ ၂၄.၆.၂၀၁၄ တွင် ကလနားဂျာရာ အင်မီဂရေးရှင်း ရုံးအပေါ်ထပ်ရှိ ONE STOP CENTRE (OSC) တွင် ၂ ဘက်အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ ၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အသိမှတ်ပြုကုမ္မဏီများ မှ တာဝန်ရှိသူများ ၊ ပါမစ်လာရောက်လျှောက်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြင့် စည်ကားစွာ ကျင်းပသွားခဲ့သည် ။
မြန်မာအစိုး၏ တရားမဝင်နိုင်ငံသားများ မလေးရှားတွင်
ပါမစ်ရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူများကပြောသလို ၊ မလေးရှားဘက်မှလည်း မလေးရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံလုံခြုံရေး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပြဿနျာားကြောင့် ပြည်တွင်းလုံခြုံရေး ပိုမိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တရားမဝင် ဖြစ်နေသာ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို စစ်တမ်းကောက်ယူကာ ပါမစ်ရရှိရန် လိုအပ်သူများအတွက် ပါမစ်ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ဖြေကြားသွားခဲ့သည် ။
ပါမစ်လျှောက်ထားမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် အောက်ပါအချက်အလက်မျာကို ဆောင်ရွက်ရမည် ။ မည်သည့် တရားမဝင် မြန်မာနိုင်ငံသားမဆို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် တရားမဝင်ဖြစ်နေသည့်သူမဆို လျှောက်ထားခွင့်ရှိကြောင်း သိရသည် ။
၁. ပတ်စပို့ လက်ဝယ် မရှိသေးသောသူများသည် မြန်မာသံရုံးတွင် (သို့) EVERFINE ကုမ္မဏီ တွင် စာအုပ်လျှောက်ထားပါ ။ ထို့နောက်ပါမစ်လျှောက်ထားရန် စီစဉ်ပါ ။
၂. စာအုပ်လျှောက်ပြီး လက်ဝယ်မရရှိသေးပါကလည်း ယခုစတင်သော G TO G အစီအစဉ်တွင်ပါဝင် လျှောက်ထားနိုင်သည် ။ စာအုပ်မရမီစပ်ကြား အထောက်အထား စာရွက်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။
၃. လျှောက်ထားသူတွင် အလုပ်ရှင်ရှိပါက OSC တွင် ချက်ချင်း လက်ဗွေ နှိပ်ကာ မလေးရှားလဝက မှထုတ်ပေးသော ပစ်မှု့ကင်းရှင်းကြောင်း နှင့် ပါမစ်ဆက်လျှောက်ရန် အတွက် ထောက်ခံစာ တစ်ရွက်ရရှိမည်ဖြစ်သည် ။
၄. အလုပ်ရှင်မရှိပါက မြန်မာအစိုးရ မှ တရားဝင် သတ်မှတ်ထားသော EVERFINE တွင်သွားရောက် အကူညီတောင်းခံ ညှိနှိုင်းပါ ။ အလုပ်ရှင်နေရာတွင် သင့်တော်သော လုပ်ငန်းရှင် ဖြည့်ရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ ။
၅. ယခု အစီအစဉ်သည် လုပ်ငန်းရှင်မရှိပါက လုံးဝ ပါမစ်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း မလေးရှား အစိုးရက တရားဝင်ကြော်ငြာထားသောကြောင့် ယခင် သို့မဟုတ်ကြောင်း သိရှိရန်လိုအပ်သည် ။
၆. လုပ်ငန်းရှင်ရှိသူများအဖို့ မိမိလုပ်ငန်းရှင် နိုင်ငံသားအား ယခု OSC သို့ဆက်သွယ်ရန် တိုက်တွန်းကာ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ နှင့် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး ဆောင်ရွက်ပါ ။
၇။ ထိုစာရွက်ရရှိပြီးနောက် ပါမစ်လျှောက်ထားခွင့် ရရှိရန် လဝက သက်ဆိုင်ရာ ၂ ဘက်ကုမ္မဏီ ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ပါမစ်ဆက်လက်လျှောက်ထားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။
၈။ ပါမစ်ရရှိရန် လဝက မှ အတည်ပြုပြီးပါက ပါမစ်ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။
၉. ပါမစ်လျှောက်ထားပေးမည့် လုပ်ငန်းရှင်သည် ယခု အစီစဉ်ကြောင့်တရားဝင်အလုပ်သမား အတွက်မည်သည့်ပစ်ဒဏ် နှင့် မည်သည့် ဒဏ်ကြေးမှ ပေးဆောင်ရန်မလိုကြောင်းသိရသည် ။
၁၀။ ပါမစ်ဖိုးကုန်ကျစရိတ်များကို မလေးအစိုးရသတ်မှတ်ထားသော OSC (ONE STOP CENTRE (သို့) EVERFINE SERVICE (M) SDN BHD သို့ တိုက်ရိုက်မေးမြန်းနိုင်သည် ။
ကေအယ်ရှိ ဆောင်ရွက်နိုင်သာနေရာများ ။
G2G (ONE STOP CENTRE)
LRT KALANA JAYA ဘူတာတွင်ဆင်းပြီး KALANA JAYA IMMIGRATION ,
Kelana Center point (PLAZA GLOMAC ) သို့ တက္ကစီစီးပါ (သို့) T624 Bus ကားစီးပါ။
ဖုန်း - 0378874724
EVERFINE SERVICE COMPANY
MASJID JAMEK LRT ဘူတာအနီး ၊ အမှတ် ၁၉ - ၂၁ ၊ JALAN TUN PERAK , KL.
032064075 , 0320264076
ယနေ့လာရောက် လျှောက်ထားသူ များအားလုံး မြန်မာနိုင်ငံသားများချည်းဖြစ်ပြီး ပထမနေ့ဖြစ်သည့်အလျှောက် လူများနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
၄. မြန်မာနိုင်ငံ တို့တွင်ပါ HOMME ခေါ် မြန်မာနိုင်ငံသားများ မလေးရှားတွင်ပါမစ်ရရှိရန်ဆောင်ရွက်သည့်နေရာများဖွင့်လစ်ထားကြောင်းလဲသိရသည် ။
အဆိုပါ နေရာများ၏ လိပ်စာအား မနက်ဖြန် ဆက်လက်ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက် ယခု ပါမစ်ပေးသည့် အစီအစဉ်အား နေ့စဉ် တင်ဆက်ပေးသွားပါမည် ။
အား ကလစ်ကာ like လုပ်ထားနိုင်သည် ။
‪#‎မလေးရှားရောက်မြန်မာများ‬ Official Facebook မှတင်ဆက်သည် ။
PHOTO : #မလေးရှားရောက်မြန်မာများ OFFICIAL PAGE
pm Tuesday, June 24, 2014 Posted by ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်